ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မဂါယန်နှင့် ဇိုင်အောင် ဒုက္ခသည်စခန်းက ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေအနေ (ရုပ်သံ)
မဂါယန်နှင့် ဇိုင်အောင် ဒုက္ခသည်စခန်းက ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေအနေ (ရုပ်သံ)
ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဘ၀က တကယ်ကို သနားစရာပါ..
ကေအိုင်အို ခေါင်းဆောင်တွေ သူတို့လူမျိုးအပေါ် တကယ်စစ်မှန်တဲ့စေတနာရှိရင်၊ မြန်မာ အစိုးရကလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအပေါ် တကယ်စေတနာရှိရင် ဒီစစ်ပွဲတွေ မရှိသင့်တော့ပါဘူး။
ကိစ္စ အတော်များများ ဟာ နိုင်ငံ တော် သမ္မတ အပါအ၀င်
ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေရဲ. အဆင်.အတန်း ၊ ခံယူချက် ၊
လုပ်ပိုင်ခွင်. အတိုင်းအတာ ... တွေအပေါ် မူတည်နေတာ
... အလွန် ရှုပ်ထွေးပါတယ် ၊ ဥပဒေအထက် ၊ အုပ်ချုပ်ရေး
ယန္တရား ရဲ. အထက်မှာ ရှိဆဲလူတွေ .... မ ပပျောက်မချင်း
ကြိုးချည်ထားတဲ.လှေလို ... ရှေ.မရောက်နိုင်ပါဘူး ။